स्थिर शासक, अस्थिर सचिव | रुपान्तरण
स्थिर शासक, अस्थिर सचिव
४ भाद्र २०७६, बुधबार १६:२६
आरती शर्माको रिपोर्ट:
देशले पहिलो पटक स्थिर सरकार पाएको छ । आइतबार मात्रै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफू पाँचवर्षसम्मै प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहने घोषणा गरेको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट सोह्रजना सचिवको सरुवा गरेका छन । साढे छ दशक लामो संस्थागत इतिहास भएको सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्डमा प्रहारगर्दै प्रशासन अस्थिर तुल्याएका छन । निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको सरुवा मनलाग्दी ढंगले गर्दा सचिवहरु खिन्न देखिएकाछन ।
विशिष्ट श्रेणीका सचिव केदारबहादुर अधिकारी एक वर्षको अवधिमा तीनवटा मन्त्रालयमा सरुवा भै सकेका छन । सरुवा भएको कुनै मन्त्रालयको वातावरण बुझिनसक्दै उनी अर्को मन्त्रालयमा सरुवा भइसक्छन ।
१७ मंसिर ०७५ मा उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सरुवा गरियो । ३ माघ ०७५ मा सचिव अधिकारीलाई स्वास्थ्यबाट उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा गरियो । उनी अहिल उद्योग मन्त्रालयबाट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा भएकाछन ।
३ माघ ०७५ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा भएका सचिव चन्द्र घिमिरेलाई तीन महिना नपुग्दै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ मन्त्रालयमा सरुवा गरियो । उनको ठाउँमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट सरुवा गरिएका रामप्रसाद थपलियालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा झण्डै नौ महिनाको अवधिमा चार जना सचिव फेरिइ सकेका छन ।
मनलाग्दी सरुवाले गर्दा निजामती सेवामा नेतृत्व तहमा रहेका सचिवहरुको नुर गिरेको छ । शान खस्किएको छ । मन्त्रीपरिषदले सचिवहरुको पटक पटक सरुवा गर्दा प्रणालीमाथि नै प्रहार भएको विज्ञहरुको भनाई छ । नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला भन्छन, एउटा मन्त्रालयमा गएर काम शुरु गर्ने वित्तिकै सरुवा गर्दा मानिसको मनोबल गिर्छ । पटक पटक सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले निजामति सेवामा सिस्टम विगार्छ ।’
एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा पुग्दा कर्मचारीले खादा ओढाएर स्वागत गर्छन । सरुवा भएका एक सचिवका अनुसार, ‘त्यस्तो खादाले नै गिज्याए जस्तो महसुस हुन्छ ।’
गत साउन १५ गते विभागीय मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको एक महिना नबित्दै सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले सचिवको सरुवा गरेको छ । १६ सचिवले सरुवा भएलगत्तै खिन्न महसुस भइरहेको बताए ।
मनपरी ढंगमा गरिने सरुवाले कार्यसम्पादन प्रभावकारी नहुनेसचिवहरुको भनाई छ । एक सचिव भन्छन, कार्यसम्पादन मूल्यांकन भन्दा पनि राजनीतिक निकटता र पहुँचका आधारमा सरुवाको चलखेल गरिएको छ । यसले इमानदारलाई निराश तुल्याएको छ । मन खस्किएको छ ।’
किन गर्छन, सरुवा ?
मन्त्रीहरुले आफना नातेदार वा कार्यकर्तालाई विज्ञका रुपमा नियुक्तगर्न दबाब दिने गरेको सचिवहरु बताउँछन । निर्वाचन आयोगमा भइरहेको फजुल खर्च रोक्न खोज्दा सरुवा गरिएको तत्कालीन सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताएका थिए । आयुक्तले आफना भाईभतिजालाई कम्प्युटर अप्रेटरमा र ज्वाईलाई विज्ञ कन्सल्टेन्टका रुपमा नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको सचिव मैनालीको दावी थियो ।
क्षेत्रीय प्रशासकबाट निर्वाचनमा आयोगमा ल्याइएका सचिव मैनाली पटक पटक सरुवाहुने सचिवमा पर्छन । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीका भाईपर्ने गोपीनाथलाई भुमि सुधार मन्त्रालयबाट महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।
सचिवहरुका अनुसार, फरक राजनीतिक आस्था देखिएमा, मन्त्रीका कार्यकर्ता एवं आसेपासेको चित्त बुझाउन नसकेका खण्डमा उच्चतहका कर्मचारीको सरुवा हुन्छ । तल्लो तहका कर्मचारीको सरुवामा आर्थिक लेनदेनको टुंगो लागेपछि मन्त्रीलाई खुशी पार्न नसकेपनि सरुवा हुन्छ । त्यसबाहेक मन्त्री निकट ठेकेदारको ठेक्कापट्टामा सहयोग गर्न नसकेपनि सरुवाको भय हुन्छ । मन्त्रीले लाए अह्राएको कुरामा आनाकानी गर्ने वित्तिकै सरुवा हुन्छ ।
७ चैत ०७४ मा प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग बालुवाटारमा छलफल गर्दा सबैको टार्गेट कर्मचारी थिए । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबहादुरल राउतले भनेका थिए, ‘सरकारलाई नै अप्ठेरोमा पार्न खोजिएको छ । कर्मचारीबाट असहयोग भइरहेको छ ।’ प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पछिका प्रधानमन्त्रीहरुले सरकारबाट बाहिरिंदा कर्मचारीले असहयोग गरेको दोष लगाउँदैै आएका छन ।
कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकारका रुपमा लिइन्छ । तर, निजामति सेवाको नेतृत्व तहमा रहेका सचिवलाई सरुवाले सास्ती दिएको छ । एकजना सचिवको त आफनो कार्यकालमा ८ ठाउँमा सरुवा भएको कर्मचारीहरु बताउँछन ।
सचिव डा. पुष्पा चौधरीप्रति मन्त्री रुष्ट भएपछि उनलाई २८ असोज ०७५ मा सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरि जगेडामा राखेको थियो । त्यसविरुद्ध सचिव चौधरी सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन ।
अदालतको आदेशपछि पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बहाल भए पनि काम गर्ने वातावरण नभएकाले खिन्न छिन । उनी सरकारी सेवाबाट अन्यत्रसर्ने बारे सोच्दैछिन । सोमबारको मन्त्रीपरिषद बैठकले सरुवा गरेका १६ सचिव मध्ये प्रायः निरास देखिन्छन । एक सचिव भन्छन, ठुलो जिम्मेवारीमा पुग्नु नै दुर्भाग्य भएको छ । विशिष्ट श्रेणिका सचिवलाई असक्षम र अनुत्पादक बनाइएको छ ।’